Linia no lalao App Store amin'ny herinandro | Vaovao IPhone
Herinandro iray hafa, ireo tovolahy avy any Cupertino dia manolotra anay rindranasa na kilalao iray halefa maimaim-poana hatramin'ny herinandro manaraka, hatramin'ny alakamisy ho avy izao, izay hanoloran'i Apple fampiharana na lalao maimaim-poana. Amin'ity tranga ity dia misafidy lalao alaina indray i Apple, lalao iray izay tsy maintsy hametrahantsika ny atidohantsika hiasa hatramin'ny farany, Miresaka momba an'i Linia aho dia lalao izay misy vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 3,99 euro. Ny tsipika dia lalao ankamantatra izay mampahafantatra antsika ny lalao miaraka amin'ny rivo-piainana milamina.
Ao Linia dia tsy maintsy mamorona filaharana miloko isika amin'ny alàlan'ny fanaovana tsipika hanatevin-daharana ireo endrika miloko isan-karazany, zavatra izay mety ho tsotra amin'ny voalohany, saingy tsy misy zavatra hafa lavitra ny zava-misy, satria ny zavatra miloko dia mihetsika amin'ny fitodihana ny tenany, manafina izy ireo, manova endrika. .. manao izay fara heriny izy ireo mba tsy ho tratry ny tsipika tokony hosoratantsika. Linia dia lalao izay tsy maintsy ataontsika ataovy miasa ny fahaizantsika sy ny fahatsapana ny gadona hahitana ny filaharana mety.
Linia Toetra mampiavaka azy
Lalao lalao tany am-boalohany mety ho an'ny downtimes izay ananantsika mandritra ny andro.
Maherin'ny 80 ambaratonga tokana sy maro loko
Ny fandrosoanao dia ho voatahiry ao amin'ny iCloud, izay hahafahantsika milalao tsy mazava eo anelanelan'ny iPhone sy ny iPad.
Valiny miaraka amin'ny Apple Game Center hahafahanao mifaninana amin'ny namantsika ary manohitra ny tenantsika.
Raha mahavita ny ambaratonga rehetra ianao dia hahazo tsy ampoizina kely
Nanamafy ny mpamorona fa hisy ambaratonga vaovao hampiana amin'ny fanavaozana ho avy, izay hahafahantsika manohy mankafy ity lalao ity. Fa momba izay ihany, Raha mahavita mamita ireo ambaratonga 80 isika dia hahazo ny famaranana mahatalanjona. Linia dia mifanaraka amin'ny iOS 9.1 na avo kokoa ary amin'ny Espaniôla, Alemanina, frantsay, italianina, anglisy, japoney ary rosiana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Linia no lalao App Store mandritra ny herinandro
Tsy hividy SoundCloud ihany ny Spotify